ဇန်နဝါရီလ အရောင်းအား၊ သတိရှိရှိ အသုံးချပါ။ | Bezzia
မာရီယာ vazquez | 09/01/2022 22:00 | လက်ဆောင်
ပြီးခဲ့သည့်သောကြာနေ့ ဇန်န၀ါရီ ရိုးရာရောင်းချမှု. ညွှန်ပြသည့်အရာအားလုံးသည် ရောင်းအားကို 2021 အရောင်းကမ်ပိန်းနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက အရောင်းမြှင့်တင်မည်ဖြစ်ပြီး အများစုမှာ အရှုံးခံပြီးသားဖြစ်မည်ကို ကျွန်ုပ်တို့သေချာပါသည်၊ ကျွန်ုပ်တို့ မှားနေပါသလား။
အရောင်းကို သေသေချာချာ မတက်ရောက်ဘဲ အခြားသူများထံမှ အကျိုးများမည်။ အထူးလျှော့စျေး ဒီဇင်ဘာနှင့် ဇန်န၀ါရီလများအတွင်း။ အရောင်းဗဟိုချုပ်ကိုင်မှုလျှော့ချခြင်းသည် မကြာသေးမီနှစ်များအတွင်း ကျွန်ုပ်တို့နှင့်အတူ လိုက်ပါလာခဲ့သည့် လမ်းကြောင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ နှစ်ခုလုံးသည် ကျွန်ုပ်တို့လိုအပ်သော ပိုမိုတတ်နိုင်သောစျေးနှုန်းဖြင့် လိုအပ်သော ထုတ်ကုန်များကို ရရှိရန် ကောင်းသောရွေးချယ်မှုတစ်ခုဖြစ်သော်လည်း၊ အရာအားလုံးသည် မဖြစ်ပါ။
စတိုးဆိုင်များသည် ခရစ္စမတ်လက်ဆောင်များ ၀ယ်လိုအားကို ဦးစွာ အခွင့်ကောင်းယူပြီး ရောင်းအားကို အားကိုးကြသည်။ ဇန်န၀ါရီလ ၇ ရက်နေ့တွင် တရားဝင် စတင်မည်ဖြစ်သည်။ဘုရင်များ လက်ထက်တွင်၊ စျေးဆိုင်များစွာသည် တစ်ပတ်အတွင်း လျှော့စျေးအချို့ကို စတင်ရောင်းချပေးသော်လည်း၊ ဤနေ့သည် အရောင်းနှင့်ပတ်သက်ပြီး တရားဝင်ပြောဆိုနိုင်သည့်ရက်စွဲဖြစ်နေဆဲဖြစ်သည်။
1.1 သင်သုံးနိုင်သည်ထက် ပိုမသုံးပါနှင့်။
1.2 သိမ်းဆည်းရန် စျေးနှုန်းများကို လိုက်နာပါ။
1.4 လက်မှတ်ကို သိမ်းထားပြီး တောင်းဆိုပါ။
ပြီးတော့ အရောင်းကို အခွင့်ကောင်းယူဖို့ သော့တွေက ဘာတွေလဲ။ အချို့ဆိုင်များတွင် 50% လျှော့စျေးထက် လျှော့ရောင်းလာသောကြောင့် ဖြစ်သည် တကယ်လိုအပ်တာကို ဝယ်ရတာ အရမ်းအဆင်ပြေတယ်။. သို့သော်၊ လျှော့စျေးများသည် ကျဆုံးရန်အလွန်လွယ်ကူသည့်အတွက် ကျွန်ုပ်တို့အား ဆက်လက်စျေးဝယ်ရန် တွန်းအားပေးသည့်ဗျူဟာတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းကို ရှောင်ကြဉ်ပြီး အောက်ပါအကြံပြုချက်များဖြင့် ရောင်းချခြင်းမှ အမှန်တကယ် အခွင့်ကောင်းယူပါ။
အရောင်းသွက်ဖို့ အချိန်ကောင်းပါပဲ။ များများမသုံးဘဲ ဝယ်ပါ။ သို့သော် လျှော့စျေးသက်သက်အတွက် အချို့သောပစ္စည်းများကို သင်ဝယ်ပါက၊ ရောင်းရနိုင်သော စုဆောင်းငွေများ မရှိတော့ပါ။ အဲဒါကို ဘယ်လိုရှောင်ရမလဲ။
ယခင်စာရင်းကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားပါက၊ ထိုကဲ့သို့သော ထုတ်ကုန်များအတွက် သင်ပေးချေနိုင်သည့် စျေးနှုန်းနှင့် သင့်ဘဏ္ဍာရေးအခြေအနေ ဘတ်ဂျက်သတ်မှတ်ပြီး လေးစားပါ။.
ဦးစားပေးပါ။ ဘတ်ဂျက်က မင်းလိုချင်တာမှန်သမျှကို ဝယ်ခွင့်မပေးဘူးဆိုရင် အလိုအပ်ဆုံးအရာကို ဦးစားပေးပါ။
သိမ်းဆည်းရန် စျေးနှုန်းများကို လိုက်နာပါ။
ရောင်းချနေသော ပစ္စည်းတစ်ခုခုကို ဝယ်ယူခြင်းဖြင့် သင် အမှန်တကယ် ငွေစုနေပါသလား။ လျှော့ထားတဲ့ ပစ္စည်းတွေကို သတိရပါ။ မူရင်းဈေးကို ပြရပါမယ်။ လျှော့စျေးဘေးတွင် သို့မဟုတ် လျှော့စျေး၏ရာခိုင်နှုန်းကို ရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖော်ပြပါ။ သင့်အတွက် ကြီးမားသော ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကို ကိုယ်စားပြုသည့် တစ်စုံတစ်ခုကို အမှန်တကယ် ဝယ်ယူလိုပါက၊ အကောင်းဆုံးမှာ ဆောင်းပါးကို သင်မလိုက်မီ လပိုင်းအလိုတွင် ၎င်းအတွက် အမှန်တကယ် ပေးချေမှုနည်းခြင်း ရှိမရှိ သိရန် ၎င်း၏စျေးနှုန်း အတက်အကျကို သတိပြုပါ။
အချို့သော အဆောက်အအုံများတွင် ဝယ်ယူမှုအခြေအနေများ ကွဲပြားနိုင်သည်။ အရောင်းကာလ။ ၎င်းတို့သည် အကြွေးဝယ်ကတ်ငွေပေးချေမှုများကို လက်မခံနိုင်၊ အပြောင်းအလဲများအတွက် အခြေအနေသစ်များ ချမှတ်နိုင်သည် သို့မဟုတ် ပြန်အမ်းငွေကို လက်မခံနိုင်ပါ။ တတ်နိုင်သော်လည်း ထိုအခြေအနေများကို အတိအလင်း ဖော်ပြရမည်။ သံသယရှိလျှင် ၎င်းတို့ကို စစ်ဆေးပါ။
မပြောင်းလဲသင့်တာကတော့ အရောင်းအပြီးဝန်ဆောင်မှုနဲ့ပါ။ အာမခံလျှောက်လွှာ. အရောင်းကာလအတွင်း ကုန်ပစ္စည်းကို ဝယ်ယူသည်ဖြစ်စေ ထိုကာလ၏ပြင်ပတွင်ဖြစ်စေ ဤအရာများသည် တူညီရပါမည်။ သူတို့ကို မလှည့်စားစေနှင့်။
လက်မှတ်ကို သိမ်းထားပြီး တောင်းဆိုပါ။
လက်မှတ်ကို သိမ်းထားပါ။ လဲလှယ်ရန်၊ ပြန်အမ်းငွေ သို့မဟုတ် တောင်းဆိုချက်တစ်ခုတင်ရန်လိုအပ်သည့်အခါ သင်ဝယ်ယူမှုအားလုံး၏ ပစ္စည်းတစ်ခုပြောင်းရန် သို့မဟုတ် ပြန်လိုလျှင် ၎င်းကို ၎င်း၏သေတ္တာတွင် သိမ်းဆည်းပါ။ လုပ်ငန်းအားလုံးသည် သင့်ပိုက်ဆံကို ပြန်ပေးရမည်မဟုတ်သော်လည်း အများစုသည် ၎င်းကို လဲလှယ်ရန် သို့မဟုတ် စတိုးဆိုင်တွင် နောက်ပိုင်းတွင် သူ့ဘာသာသူသုံးစွဲရန် ၎င်း၏စျေးနှုန်းအတွက် စျေးဆိုင်တစ်ခု လက်ခံရရှိရန် ကမ်းလှမ်းသည်။
အရောင်းကာလအတွင်း စားသုံးသူတစ်ဦးအနေဖြင့် သင့်တွင် တစ်နှစ်တာ၏ အခြားအချိန်များကဲ့သို့ အခွင့်အရေးများ ရရှိမည်ဖြစ်သည်။ ပြဿနာတစ်ခုရှိ၍ ချစ်ကြည်ရင်းနှီးစွာ မဖြေရှင်းပါက၊ သင့်တွင် ရွေးချယ်ခွင့်အမြဲရှိမည်ဖြစ်သည်။ တောင်းဆိုချက်စာရွက်ကိုတောင်းပါ။ သင်၏တိုင်ကြားချက် သို့မဟုတ် သင်၏တိုင်ကြားချက်များကို ပြန်လည်သုံးသပ်ပါ။
စျေးဝယ်ထွက် ယုံကြည်စိတ်ချရသောတည်ထောင်မှု ဤအကြံပြုချက်များကို လိုက်နာခြင်းဖြင့် သင်သည် ဇန်န၀ါရီလ၏ရောင်းအားကို ကျန်းမာသောနည်းလမ်းဖြင့် ခံစားနိုင်မည်ဖြစ်ပြီး၊ ထက်ထက်မြက်မြက်နှင့် ဈေးပိုပေးပြီးနောက် နောင်တရစရာမလိုဘဲ စျေးဝယ်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Bezzia » လက်ဆောင် » ဇန်န၀ါရီလ ရောင်းအားကို သတိရှိရှိ အသုံးချပါ။
ပင်လယ်ဆားရဲ့ အကျိုးကျေးဇူးတွေက ဆံပင်နဲ့ ခန္ဓာကိုယ်အတွက် ဖြစ်ပါတယ်။